HGH ọgwụ na Bangkok na-anabata ego ịkwụ ụgwọ
Ego ịkwụ ụgwọ na Bangkok
Nnukwu ụlọ ọgwụ anyị na-ebute n'Ịntanet na Bangkok na-anabata ugwo site na ego,
naanị dị na Thai Baht, a na-akwụnye ego na onye ozi mgbe
ịlele ma nyochaa usoro nkeonwe gị.
Kedu otu esi akwụ ụgwọ site n'obodo ndị ọzọ na mpaghara dị na Thailand?
Ịkwụ ụgwọ ndị ahịa site na Phuket, Chiang Mai ma ọ bụ obodo ndị ọzọ
A na-eji okpukpu mbụ mee mpaghara mpaghara Thailand.
Mgbe ị debere iwu na weebụsaịtị anyị site na iji ụgbọ ahịa
ma ọ bụ site na onye ọkachamara n'Ịntanet, anyị ga-eziga nkọwa nkọwa ụlọ akụ anyị
na email gị maka ịkwụ ụgwọ.
- Aha nke ụlọ akụ
- Nọmba akaụntụ
- Aha Ụlọ Ọrụ
Mgbe ị kwadoro ịkwụ ụgwọ ahụ n'ime awa 3-12, anyị ga-ebufe ngwaahịa gị
na adreesị mbupu
Gụkwuo banyere nnyefe (njikọ)
Kedu ka m ga-esi tinye ego na akaụntụ HGH ahịa ọgwụ?
Iji bulie akaụntụ ahụ na ego, e nwere ụzọ 2, ka anyị kwuo banyere onye ọ bụla.
1) Akaụntụ bulie elu site na ATM
2) N'ụlọ ahịa ọ bụla ma ọ bụ nnukwu ụlọ ahịa Thai, ị nwere ike ịchọta ATM
Ngwaọrụ iji bulie ma nyefee onye ọzọ aka, nke a nwere ike ịbụ
mere iji kaadị ma ọ bụ site na igwe ego na-anabata ego
Iji mee nke a, họrọ ọrụ na ATM
- Tinye aha nke ụlọ akụ ahụ
- nọmba ọnụọgụ nke Beneficiary
- Mgbe ahụ kwụọ ụgwọ ma ọ bụ na kaadị
- Mgbe nkwenye, kwenye aha na aha ụlọ ọrụ nke onye nnata
- Nkwenye nke usoro
Mgbe i mechara ịkwụ ụgwọ ahụ, biko chekwaa nnata
Nyefee site na ụlọ ọrụ akụ
Ọ bụrụ na ị na-aga n'onwe gị na ụlọ akụ, usoro dum ga
wepụ ihe karịrị 15 nkeji, dee ma ọ bụ bipụta nkọwa maka
ịkwụ ụgwọ tupu oge eruo, nyefe data nyefe ego n'ụlọ akụ, nke
ndị ọrụ ụlọ akụ ga - enyere gị aka iji ihu ọchị na ịkwanye ùgwù.
Maka ndị na-ere akụ na Thailand, usoro ịkwụ ụgwọ bụ ọbụna
ọ dị mfe karị, ịkwụ ụgwọ nwere ike ịme ma ọ bụrụ na ị na-eji ngwa ntanetị ekwentị
ụlọ ọrụ ịntanetị na-enweghị ịhapụ ụlọ gị.